ALBUMS PHOTOS - Sehatra ho an'ny gasy tia vetaveta
Par gasytiavetaveta dans gasy tia vetaveta le 20 Mars 2007 à 13:11
Rehefa nandinika aho dia voamarika fa ny gasy mipetraka any ivelany (Frantsa,...) no betsaka tamin'ireo nandefa sary. Misy ihany ny mipetraka eto Madagasikara fa vitsy noho ny avy any ivelany.
Ohatry ny alaim-panahy aho hiteny hoe marina ihany ilay hoe "ny gasy tia vetaveta fa saro-kenatra, na hoe ny gasy saro-kenatra fa tia vetaveta".
Raha ohatra mantsy ny fiaraha-monina eto Madagasikara no manahirana, tsy voatery aseho anie ny tarehy e, raha ny appareil photo numerique indray, efa betsaka ny manana (appareil photo numerique mantsy no mety satria ohatry ny hanahirana ny handeha hanasa pellicule misy sary vetaveta eny amin'ny Fuji na Kodak ...!!!).
Na izany aza, manentana hatrany ny gasy eto an-toerana handray anjara mavitrika amin'ny fandefasana sary.
Entanina toy izany koa ianareo gasy any an-dafy hanohy ny fanohanana mahery vaika.
Momba ny sarin'ireo metisses, tapa-kevitra aho fa havoaka tsy ho ela eto ny sarin'izy ireo.
Misaotra anareo namaky hatramin'ny farany, Commentaires
ORIGINALE aloha ilay hevitra e!
tsy hatahorana ho voasakan'ny lalàna izany mintsy ny toy izao!fa ny soso-kevitra hoe raha mbola tsy afaka misokatra ara-dalana ny club maninona raha afaka mifap-contacte ny mpikambana mba hafahana misintona plaisir ny vatana fa tsy maso fotsiny!ATAO SOUS FORME NA VIE PRIVE IHANY E!DE TSY AFAKA MITSABAKA @IZANY RAFANJA MASIAKA